Tena tafaverina izahay
Tamin'ny 24 Febroary 2020, taorian'ny iray volana nitokanana iray volana mahery, dia tonga soa aman-tsara tao amin'ny orinasa ny mpiasa rehetra ao amin'ny EBI.
Rehefa niverina niasa izahay dia nanomana hetsika manokana roa ho an'ny rehetra ny orinasa, ny fizarana sakafo no voalohany. Ny mpiasan'ny EBI rehetra dia mitondra ny sakafony tiany zaraina amin'ny rehetra.
Taorian'ny fisakafoanana dia nanomboka nizara bonus vaovao izahay. Faly dia faly ny olona rehetra.
Ny orinasanay koa dia manomboka manohy ny asa sy ny famokarana amin'ny fomba milamina mba hamenoana ny filan'ny mpanjifa. Ny orinasa dia manaraka tanteraka ny fepetra momba ny fahadiovana sy fiarovana mba hiantohana ny fahasalaman'ny mpiasa mpamokatra, koa aza manahy momba ny olan'ny virus, mametraka baiko ho anay.
Amin'ny andro voalohany amin'ity taona sarotra ity dia mirary fahasalamana ho anao rehetra amin'ny taona 2020.
EBI dia mpanamboatra matihanina amin'ny fonosana ara-tsakafo Eco ho an'ny sakafo sy zava-pisotro, kosmetika, menaka manitra, fanafody, trano ary vokatra indostrialy.
Ny fonosana aliminioma antsika dia vita amin'ny alinalina madio 99,7% izay mahatonga azy ho sariaka amin'ny tontolo iainana, azo averina, azo entina ary mavesatra maivana. Manolotra ny fonosana aliminioma faran'izay betsaka indrindra (Diamondra, haavony, soroka ary endrika) isika, afaka manomboka amin'ny 10ml ka hatramin'ny 1000ml na lehibe kokoa aza.
Miarahaba anao hifandray amin'ny RFQ: